DAAWO:- Maxay ka caroodeen Axmed Madoobe iyo Xaaf oo ay uga baxeen shirkii Garoowe “Iskaashigii dowlad goboleedyada oo …”.
May 12, 2019 Xafiiska Puntland Faallooyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somalia, Wararka Maanta 2
Shirkan ayaa waxaa caqabad ku noqday tabashooyin intooda badan ka imaanayey maamulada Galmudug iyo Jubbaland oo ku eedeeyey Madaxda Qaranka (Madaxweyne Farmaajo iyo Raysalwasaare Khayre) inay farogelin ba’an ku hayaan siyaasadooda gudaha iyo doorashooyinka la filayo in dhawaan ay ka dhacaan labadaasi maamul.
Arrintan ayaa caqabad ku noqotay in si dhab ah looga doodo qodobo badan oo horyaalay madaxda ku shireysay Garowe oo ay kamid ahaayeen arrimaha Doorashada 2020, Qeybsiga Khayraadka & Deeqaha iyo Dhameystirka Dastuurka.
Madaxweynayaasha Galmudug iyo Jubbaland ayaa labaduba sheegay in shirka uu kasocon waayey Dowlada Federaalka iyagoona go’aansaday inay shirka isaga baxaan.
Afar arrimood baa kala boodsanaanta sababay:
1. Madaxdan oo aan ahayn kuwo hoggaanka si dhab ah ugu qalma maadaama ay ka arradan yihiin farsamada dawlag wanaagga salka ku haya dawlad wadaagga iyo shaxda siyaasadeed ee ku xeeran.
2. Madaxdan oo aan ahayn kuwo ay falsafadda Soomaalinimo maankooda iyo quluubtooda ka qoyantahay ee aad uga madhan aragtideeda dheer iyo dareenka muqaddasnimadeeda ee qummaati ugu bidhaamin lahaa masiirka dhabta ah ee ummadda Soomaaliyeed.
3. Madaxdan oo ah kuwo damiirku aad uga liito ee dhaadi waayay halista xun ee ay faragalinta shisheeyuhu ku hayso jiritaanka iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo mandiqaddooda ballaadhan ee damaca weyn laga leeyahay.
4. Ummadda Soomaaliyeed oo ay jahliga iyo ragaadku ka dhooheen darajada sarreysa ee ay Soomaalinimadu ku dhisan tahay iyo qiimaha aan la qiyaasi karin ee ay ku fadhido mandiqaddeeda kheyraadka lagu baahay ee caalamka kaga beeggan goob ka mid ah kuwa dunida oogu straatijisan ee ay nolosha oogu tayo sarreysa ugu noolaan lahaayeen.
War in ay horfariistaanba ma aha non meel uu u socdo aan la garaneyn isaguna oh inuu Caqli iyo talo uu wax ku hogaamin kara uusan ahayn
Waa jaahil shawl ka dhigtay in muwadaniinta is nacayb iyo isu droid ka shaqaynaya
Warbixin:- Kenya maxaa ka keenay kuleylka Cusub “Ma doorashada Kismaayo, ma sharcigii batroolka mise ICJ”?.